Ambubag/ Resuscitator, Silicon
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 321 view counts
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 600 Piece(s)
Brand : KANGSHI
Model : KS-NC
Color : Yellow cap
Tube material : Glass or plastic
Volume of blood draw (ml) : 1~10ml
Tube Spec. (mm) : 12/13*75, 12/13*100, 15/16*100, 15*120mm Tube
Vacuum Blood Collection Tube called Gel & Clot Activator Tube, with additive of Gel & Clot Activator, used for for biochemistry and immunology tests, There is gel inside the tube at the bottom. After centrifugation, the gel can separate the serum from the blood cells.
Zaw Win International Trading Co.,Ltd မှ EO Gas ဖြင့် ပိုးသတ်ထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် တစ်ခါသုံးမျက်စိခွဲစိတ်ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ မှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာသုံး ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အသုံးပြုသော တစ်ခါသုံး Butterfly Blood Collection set များလည်းရရှိနိုင်ပြီး ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ယူရရှိလိုပါကလည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါသည်။အားကစားသမားများအတွက်လည်း foldaway stretcher & spine board များ လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။နယ်မြို့များမှ မှာယူလျင်လည်း ကားဂိတ်ထိ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
For K.S Vacuum Blood Collection Tubes
May I get the quotation for "K.S Vacuum Blood Collection Tubes" ?